December 14, 2020 - Khitalin Media
မနေ့ကထက် ဒီနေ့ပိုချစ်စေတဲ့နည်းလမ်း ( ၄ ) သွယ်
December 14, 2020 by Khitalin Media
မနေ့ကထက် ဒီနေ့ပိုချစ်စေတဲ့နည်းလမ်း ( ၄ ) သွယ် အချစ်ကြောင့်စိတ်ညစ်နေလား။ အချစ်ဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ်လို နားလည်မှုတွေထပ်ပေးရဦးမလဲ။ ပြဿနာတွေဆိုတာ အမြဲကိုယ့်ဆီဘဲ ရောက်လာ နေတယ် လို့ထင်သလား။ ဒီချစ်မိခဲ့တဲ့ရင်ခုန်သံလေးတွေ ကြောင့် ခေါင်းစားနေရတယ်ဆိုပါတော့။ ဒီတော့ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေနဲ့ မပျော်ရွှင်တဲ့နေရာမှာ ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေ ခံစားနိုင်စေဖို့ လက်ရှိပြည့်စုံနေတဲ့ချစ်သူတွေကတော့ ပိုပီးတော့ ချစ်သက်ရှည်နိုင်ဖို့ ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ အပေးအယူမျှ…..ဂရုစိုက်တတ်မှ တင်းကျပ်စွာချည်နှောင်ထားတဲ့ ချစ်နည်းထက် လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့နားလည်မှုပေးကြည့်ပါ။ အမြဲတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးကြပါ။ အချိန်တွေမအားလပ်ရင်တောင် တစ်ပတ်တစ်ခါစကားလက်ဆုံကျဆွေးနွေးပါ။ နွေးထွေးတဲ့လက်တစ်စုံနဲ့အတူ ကမ္ဘာပတ်သလို လမ်းလျှောက်ထွက်ပေးပါ။ ဝေးကွာနေတဲ့ချစ်သူတွေကတော့ ညအချိန်မှာ ဖုန်းပြောရင်း SMS ပို့ရင်းကုန်ဆုံးကြည့်ပါ။ ””ဘယ်တော့မှ အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ အချစ်ကိုအရောင်ပြယ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့။ ””ချစ်သူအတွက်အချိန်ဆိုတာ ပေးကိုပေးသင့်တဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုပါ။ ၂။ ရန်ဖြစ်စေမဲ့စကား…..အမြန်ရှောင်ရှား အချစ်မှာ ပြဿနာဖြစ်မဲ့ … Read more
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း သိထား သိမ်းထားသင့်တဲ့ ဘုရားရှိခိုးလျှင် ဘာကြောင့် သုံးကြိမ် ဦးချရသလဲ…
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း သိထား သိမ်းထားသင့်တဲ့ ဘုရားရှိခိုးလျှင် ဘာကြောင့် သုံးကြိမ် ဦးချရသလဲ… ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းသည် စေတီပုထိုး၊ ဘုရားဆင်းထုတော်၊ သံဃာတော်များ၊ မိဘဆရာ၊ သက်ကြီးဝါကြီး များကို ရှိခိုးကန်တော့ခြင်းသည် ဓလေ့ထုံးစံ တစ်ခုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ရခြင်းထက် ပိုပါသည်။ လုပ်ဆောင်အပ်သော ဝတ္တရား၊ လိုက်နာပြုကျင့်ရမည့် ဆက်ဆံရေး၊ ဂုဏ်ယူဖွယ် လူမှုစရိုက်၊ သိမ်မွေ့ရိုကျိုးသည့် ယဉ်ကျေးမှု အဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားရှိရခြင်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဧ။် အဓိက ထမ်းဆောင်ရမည့် အထူးတာဝန်ကြီးတစ်ရပ်ပင် ဖြစ်သည်။ မွေးဖွားလာပြီး မည်သည့်အချိန်မှစ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်သွားသလဲဆိုသည်ကို သတိမမူလိုက်မိဘဲ ဖြစ်တတ်ကြသည်၊ မိဘက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်လို့ လိုက်၍ဖြစ်သွားသည့် မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ များမည် ထင်သည်။ ဆင်းထုတော်ကို, စေတီပုထိုးများကို ရှိခိုးဦးချလိုက်သည်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သွားသည်ဟု ထင်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် မမှန်ပါ။ ဘုရား၊ တရား၊ … Read more
ဆိုင်ကယ်မောက်တဲ့ ဆယ်လီ Htet Htet Khine ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေနေ
December 12ရက်နေ့က ဆိုင်ကယ်မောက်တဲ့ ဆယ်လီ Htet Htet Khine ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေနေ သုံးလေးပတ်လိမ့်သွားတာ ငါသေပြီထင်နေတာ ဆိုင်ကယ်မှောက်တာကို မထူပဲလူ၎ .၅. ၁၀ယောက်လောက်ဝိုင်းကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုအံဩမိတယ်အန်တီတို့ဦးလေးတို့ရယ် ဆိုင်ကယ်တိုက်မှူမဟုပ်ပါဘူး ဆိုင်ကယ်မှောက်တာပါအမှူလည်းမဖြစ်ပါဘူး ကောင်လေးတစ်ယောက်လာကူညီလို့သာဆေးရုံရောက်ခဲ့ရတာဆေးရုံပို့ပေးတဲ့မောင်လေးကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခေါင်းမူးပြီးမှောက်နေတာကို ရပ်ကြည့်နေတဲ့အားကောင်းမောင်းသန်ဦးလေးတို့အန်တီတို့ရယ်နေ နိုင်လိုက်ကြတာနော် စိတ်မပူကြပါနဲ့တော့နော် မျက်လုံးရောကောင်းကောင်းဖွင့်နိုင်ပြီ ပါစပ်လည်းနဲနဲဟနိုင်သွားပြီ အစာလည်းနဲနဲဝင်ပြီနော် အိမ်ကိုသတင်းလာမေးတဲ့သူတွေရော msgကလာမေးတဲ့သူတွေရောကျေးဇူးအထူးပါရှင်msgက နေကောင်းမှစာပြန်တော့မယ် အားလုံးနားလည်ပေးကြပါနော် Htet Htet Khine fb ပရိတ်သတ်ကြီးလဲ ညီမလေး ထက်ထက်ခိုင်း အမြန်နေကောင်းဖို့ ဆုတောင်းပေးကြပါအုံးနော် Unicode December 12ရကျနကေ့ ဆိုငျကယျမောကျတဲ့ ဆယျလီ Htet Htet Khine ရဲ့ ကနျြးမာရေးအခွနေေ သုံးလေးပတျလိမျ့သှားတာ ငါသပွေီထငျနတော ဆိုငျကယျမှောကျတာကို မထူပဲလူ၎ .၅. ၁ဝယောကျလောကျဝိုငျးကွညျ့နတေဲ့သူတှကေိုအံဩမိတယျအနျတီတို့ဦးလေးတို့ရယျ ဆိုငျကယျတိုကျမှူမဟုပျပါဘူး … Read more
ပါးစပ်ကထုတ်မပြောပေမယ့် မိန်းကလေးအများစု သဘောကျတတ်တဲ့အချက်များ
(၁)ကိုယ့်ကို ငေးကြည့်ခံရတဲ့အခါ မိန်းကလေးတော်တော်များများမှာ ကိုယ့်ကိုငေးမောကြည့်ခံရတာကို မကြိုက်သူ တော်တော်ရှားပါတယ်။ဥပမာ သင်ဟာချစ်သူနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ လှလှလေးဝတ်ပြီး မိတ်ကပ်လှလှလေးပြင်လာတယ်ဆိုပါတော့။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့လျှောက်လာတဲ့သင့်ကို ပုရိသတွေလည်ပြန်ကြည့်တာကိုသာယာနေတတ်ကြ ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မျိူးမှာဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလှဆုံးဆိုပြီး ဂုဏ်ယူတတ်ကြတယ်မဟုတ်လား။ဘေးဘီဝဲယာကိုတောင် မမြင်နိုင်တော့ဘဲ သူများတွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုမှာ ကြိတ်ဂုဏ်ယူတတ်ကြတယ်လေ။ (၂)အခြားအမျိူးသမီးတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုမနာလိုတဲ့အခါ ကိုယ့်ဘဲဘဲကို တခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်က ငေးကြည့်နေတာကို မိန်းကလေးတွေမကြိုက်ကြပါဘူး။ထိုသို့သောအခါမျိူးမှာ မနာလိုစိတ်နှင့်ချစ်သူကို ကိုယ်သာပိုင်သလိုလုပ်ပြလိုတဲ့စိတ်တွေဝင်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ကောင်လေးချောချော အမိုက်စားလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ဘဲကို လာ crush တဲ့တခြားမိန်းကလေးတွေက ကိုယ့်ကိုမနာလိုဖြစ်တဲ့အခါ ဂုဏ်ယူတတ်ကြပါတယ်။ (၃)ကောင်လေးတွေလာအီတဲ့အခါ မိန်းကလေးတော်တော်များများက အီတာလောက်က အရေးမကြီးဘူး။အန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ထင်တတ်ကြပါတယ်။ကော်ဖီဆိုင်က ကော်ဖီဖျော်တဲ့သူချောချောလေးနှင့် မျက်လုံးချင်းဆုံမိတာ၊ကျောင်းသွားဖော်သူငယ်ချင်းက လှတယ်လို့ချီးကျူးတာ၊အွန်လိုင်းပေါ်က ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောနေတာ ကို မသိစိတ်က သာယာတတ်ကြပါတယ်။ (၄)ယောက်ျားတွေကိုယ့်ကြောင့်ရန်ဖြစ်တာ ရုပ်ရှင်တွေထဲကလိုပေါ့။ကိုယ့်အတွက်နဲ့ ချစ်သူက မားမားမတ်မတ်ရန်ဖြစ်ပေးတာ၊ကိုယ့်ကို ကာကွယ်ပေးတာမျိူကို မိန်းကလေးတွေ သဘောကျကြပါတယ်။ (၅)ကိုယ့်အတွက်ဆို ငွေရေးကြေးရေးကို … Read more
ယနေ့ခေတ်မှာတော့ ခါးနာတဲ့ဝေဒနာကို လူတိုင်းနီးပါးခံစားနေကြရပါတယ်၊ အကြောင်းအရင်းကတော့ အလုပ်ခွင်မှာ အချိန်ကြာကြာ ထိုင်၍သော်၎င်း မတ်တပ်ရပ်၍သော်၎င်း အလုပ်လုပ်နေကြရတာကြောင့် ခါးရဲ့အနေအထား ပုံမမှန်တဲ့အတွက် ခါးနာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခါးနာတဲ့အခါ ပရုတ်ဆီတို့လို ပူလောင်တဲ့ဆေးတွေလိမ်းပေမယ့် ခဏတစ်ဖြုတ်ပဲ သက်သာပြီး မကြာခင်ပြန်နာလာတတ်ပါတယ်။ အချို့လူတွေကတော့ မှားယွင်းတဲ့ ခါးလေ့ကျင့်ခန်းတွေ၊ ခါးကိုလှည့်ပြီး ချိုးတာတွေ လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုမှားယွင်းတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာ ခါးနာတာမပျောက်တဲ့အပြင် ပိုဆိုးလာစေပါတယ်။ ယခုဖော်ပြပေးမယ့် နည်းလမ်း(၆) သွယ်ကတော့ ချွေးထွက်အောင် ပင်ပင်ပန်းပန်း လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်စရာမလိုပဲ ညင်ညင်သာသာနဲ့ ၁၅ မိနစ်အတွင်မှာ ခါးနာတာကို ယူပစ်သလို ပျောက်ကင်းသွားစေပါလိမ့်မယ်။ ခါးနာစေတဲ့အဓိကအချက်ကတော့ ကျောရိုးမကြီးရဲ့ ဘေးမှာထိန်းပေးထားတဲ့ ကြွက်သားတွေ တောင့်တင်းလွန်းနေတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ခါးအလွန်နာနေတဲ့အချိန်မှာ မတ်မတ်အနေအထားနဲ့ ထိုင်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ကျောရိုးကို ပြန်စမ်းကြည့်တဲ့အခါ ကျောရိုးက မြောင်းတစ်ခုလို … Read more
အိမ်ထောင်တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက် အချစ်ဟာအရေးအပါဆုံး အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော်လည်း ဦးနှောက်ကအခန်းကဏ္ဍကိုတော့ မေ့ထားလို့မရပါဘူး။ နှလုံးသားရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းရွေးချယ်လိုက်ပေမယ့် ရွေးချယ်မှုမှားယွင်းတဲ့အခါ …… ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ပြဿနာများစွာကို ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ့်။ ဒါကြောင့် သင့်အတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့အကျင့်စရိုက် (၁၅)ချက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုပဲ အာရုံစိုက်တတ်သူ သင်အိမ်ထောင်ပြုပြီးတဲ့အခါ တာဝန်ယူမှုတွေဟာ အရမ်းကိုကြီးလာပါပြီ။ တကယ်လို့သာ သင့်ရဲ့ခင်ပွန်းက သင့်ကိုဂရုမစိုက်ပဲ သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုသာ အာရုံစိုက်နေမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုအရာတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ သင်ထင်ပါသလဲ? ၂။ တောက်တဲ့လိုကပ်နေတတ်သူ သင့်ရဲ့ဘေးနားမှာပဲ တောက်တဲ့လိုအမြဲတမ်းကပ်နေမယ့် သူမျိုးကိုလည်း ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ personal space လို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်နယ်ပယ်လေးတစ်ခု ရှိဖို့လိုအပ်တာကြောင့် အမြဲတမ်းလိုက်ကပ်နေတတ်ရင်လည်း အဆင်မပြေပါဘူး။ ၃။ ကြမ်းတမ်းပြီး ရိုင်းစိုင်းသူ သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်က သင့်ကိုလေးစားမှုမထားပဲ ကြမ်းတမ်းစွာပြောဆိုဆက်ဆံတတ်သူ၊ ရိုင်းစိုင်းတတ်သူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ စောစောစီးစီးလမ်းခွဲလိုက်တာ ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကြာလာတာနဲ့အမျှ … Read more
၁)သင့်လက်တွဲဖော် ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးစိတ်ကူးကို မေးမြန်းစူးစမ်းကြည့်ပါ။ သူမ၏ရည်မှန်းချက် များကို သိအောင်လုပ်ပါ။ ဥပမာ_ သူမက သင့်ကိုမှီခိုမည့်သူလား၊ အိမ်ထောင်ရေး ကိုသင်နှင့်အတူဦးစီးချင်သူမျိုးလားဆိုတာကို လေ့လာအကဲခတ်ကြည့်ပါ။ ၂)သင်နဲ့အတူမိသားစုကမ္ဘာလေးဖန်တီးချင်တဲ့သူဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာကို လက်ထက်ခွင့်မတောင်းခင် သေချာသိအောင်လုပ်ပါ။ မိသားစုများတိုက်တွန်းချက်အရ၊ ဘေးလူများ၏ပြောစကားများအရ သင့်ကိုလက်ခံတယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနှင့်။ ၃)လင်နဲ့မယားလျှာနဲ့သွား ဆိုတဲ့စကားကို သင်လက်ခံနိုင်ပါသလား။ မည်မျှပင်ချစ်လှပါသည်ဆိုသော်ငြားလည်း အနည်းနှင့်အများတော့ သဘောထားကွဲလွဲမှုများ တစ်ခါတရံဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သောကိစ္စရပ်များနှင့် တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ သည်းခံနိုင်စွမ်းရှိရဲ့လား၊ ကောင်းမွန်စွာကျော်ဖြတ်သွားဖို့အသင့်ဖြစ်ရဲ့လားဆိုတာကို မိမိကိုယ်ကိုစမ်းစစ်ကြည့်ပါအုံး။ ၄)အထက်ဖော်ပြပါအချက်များနဲ့ မေးခွန်းထုတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ လက်ထက်ခွင့်လက်စွပ်ရွေးချယ်ခြင်းကို စတင်နိုင်ပါပြီ။ သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်က မည်ကဲ့သို့သောကျောက်မျက်ရတနာမျိုးကို နှစ်သက်တဲ့သူလဲဆိုတာကို စုံစမ်းပါ။ သူမကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ကျောက်မျက်ရတနာမျိုးနဲ့ လက်ထက်ခွင့်တောင်းလိုက်ရင် သူမကိုပိုပြီး အံ့သြသွားစေမှာ အသေအချာပါပဲ။ ၅)ဘယ်နေရာမှာ ပရိုပိုစ့်လုပ်ရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားထားပါ။ သူမ၏စရိုက်က ဘယ်လိုနေရာမျိုးနဲ့ သင့်တော်မလဲဆိုတာ ရွေးချယ်တတ်ပါစေ။ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့ ကန်ရေပြင်ဘေးမှာလား၊ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာလားဆိုတာကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ တိုင်ပင်ပါ။ … Read more
မိန်းမ တစ်ယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်
ကျမချစ်သူကို ပြောခဲ့ဖူးတယ် ။ နောက် ၂နှစ်လောက်နေရင် ငါလက်ထပ်ဖြစ်လိမ့်မယ် ။ ဒါပေမယ့် ငါလက်ထပ်တဲ့သူက နင်ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်လိမ့် မယ် ။ နောက် ၂နှစ်လောက်နေရင် အဆင်ပြေတဲ့သူကို ငါ လက်ထပ်သွားမှာပဲလို့….။ ကြားကြားချင်းတော့ သူစိတ်ဆိုးတယ် ။ နောက်တော့ သူ လက်ခံသွားတယ် ။ ကျမဆိုလိုတာက မိန်းမတစ်ယောက် လက်ထပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါ …. အချစ်က အဓိကမကျတော့ဘူး | ကိုယ်ချစ်တဲ့သူဆိုရင် တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့ ။ ဒီလူကို တစ်သက်လုံးအားကိုးရတော့မှာ တစ်သက်တာ မှီခိုရတော့မှာမဟုတ်လား ။ အချစ်က ထမင်းမကျွေးဘူး ။ ကိုယ် ထမင်းအငတ်ခံနိုင် တယ်ထား ကိုယ့်ရင်သွေးလေးတွေကို ပြည့်စုံအောင် ဖန်တီးဖြည့်စွမ်းချင်တယ် ။ ကိုယ့်ကလေးကို သူများထက် အောက်မကျစေချင်ဘူး … Read more
မကြာခဏ ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်း မပြုလုပ်သင့်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း( ၆) နေရာ
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တချို့အစိတ်အပိုင်း နေရာတွေက မကြာခဏ ဆေးကြော သန့်စင်ပေးဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒိနေရာတွေကို လုံးဝ (သို့မဟုတ်) အကြိမ်ရေအနည်းဆုံးသာ ဆေးကြောပေးပါ။ ၁။ နား အမှန်တကယ် အားဖြင့် နားအတွင်းမှာရှိတဲ့ နဖားချေးတွေက အညစ်အကြေးနှင့် အပျက်အစီးများကို သန့်စင်ဖယ်ရှား ပေးနေတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဒီနဖားချေးတွေကို ဖယ်ယူ ရှင်းလင်းလိုက်တဲ့အခါ နားကို အကာအကွယ် မပေးနိုင်တော့သလို ဖြစ်သွားစေပါတယ်။ နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်များကလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး နားကိုသန့်ရှင်းခြင်း၊ ကလော်ခြင်းများ မပြုလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ၂။ ဆဲလ်သေများ ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်နေ့လျှင် မျက်နှာကို ၂ကြိမ်သစ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ သို့သော် နေ့စဉ် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း မျက်နှာကို ပွတ်တိုက် ဆေးကြောခြင်းမျိုးတွေကို မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဥပမာ ဆဲလ်သေများကို … Read more
တကယ် မချစ်ဘဲ အချစ်ကို ကစားတတ်တဲ့ ယောက်ျားတွေရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာများ
အချစ်ဆိုတာ ခံစားချက် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခံစားချက်ကိုမှ ကစားတတ်ကြတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း သင့်ကို မချစ်ဘဲ ချစ်ဟန်ဆောင်ပြီး သင့်ကို လာကစားမယ့်သူတွေ လောကမှာ တကယ်ပဲ ရှိပါတယ်။ အချစ်ကို ကစားပြီး တစ်ဖက်သားကို နာကျင်စေတဲ့ သူတွေကတော့ ဒီလို လုပ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှိနေပါတယ်။ အချစ်ကို ကစားတဲ့သူတွေ သုံးတတ်တဲ့ နည်းတွေကို အခုလိုပဲ ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။ အပြောကောင်းတယ် သူတို့တွေရဲ့ သင်္ကေတက လုံးဝ အပြောကောင်းတာပါပဲ။ သင့်ကို စပြီး ချဉ်းကပ်ချိန်မှာ သင့်ရဲ့ အကြိုက်တွေ အတိုင်း ဖြစ်စေသူလည်း ဖြစ်ပြီး သင့်ကို အရမ်း စိတ်ချမ်းသာစေပါလိမ့်မယ်။ ဒါက လူတစ်ယောက်ကို သူတို့ကို ယုံကြည်လာအောင် ပြုလုပ်တာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က သင်နဲ့ … Read more